Alimbavaka zoma 20 Jona 2014 – FJKM Ambavahadimitafo Alimbavaka zoma 20 Jona 2014 |
Alimbavaka zoma 20 Jona 2014
Publié le 18 juin 2014 à 08:06
Aminao ho hitahiana ny firenena rehetra ( Gal 3 : 8 )
Hanatanteraka alimbavaka ny FJKM Ambavahadimitafo ny zoma 20 hifoha asabotsy 21 jona maraina.
Ny Fiangonana manontolo no mikaraka sy asaina hiatrika izany. Koa asaina indrindra ny kristiana rehetra ny alarobia 18 jona hariva amin’ny 6 ora mba hanangonana ny hevintsika hahatomombana izany alimbavaka izany.
Amin’ny 7 ora no manomboka ny fanompoam-pivavahana ka ny Mpitandrina SOLOFOAROHASINA Voahanginirina avy ao amin’NY FJKM Betela Sud Ambohipo no hitory ny Tenin’Andriamanitra.
Marihana fa tsy ny AFF irery no mpiandraikitra ny Alimbavaka fa ny Fiangonana manontolo.